प्रेमिकाको आमा–बुबाको हत्या गरेर साउदी होमिएका गोविन्द! – List Khabar
Home / समाचार / प्रेमिकाको आमा–बुबाको हत्या गरेर साउदी होमिएका गोविन्द!
प्रेमिकाको आमा–बुबाको हत्या गरेर साउदी होमिएका गोविन्द!
admin January 9, 2022 समाचार Leaveacomment 68 Views
इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका प्रेमिकाका आमा–बुबा हत्या गरेर साउदी गएका गोविन्द मगर इन्टरपोलकै सहयोगमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उदयपुरका मानबहादुर तामाङ र उनकी श्रीमती हर्कमायाको हत्या अभियोग उनीमाथि छ ।
आफूसँग प्रेम–सम्बन्ध भएकी छोरीको अरूसँग विवाह गरिदिएको रिसमा उनले युवतीका आमा–बुबाको बीभत्स हत्या गरेका थिए । मगरले सुरुमा मानबहादुरमाथि आक्रमण गरेका थिए । हर्कमाया रोक्न आउँदा उनको समेत हत्या गरेका थिए । घटनापछि फरार मगरविरुद्ध गत वर्ष माघमा रेड नोटिस जारी भएको थियो । उनलाई लिन नेपाल प्रहरीको टोली साउदी अरब जान लागेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
६ देशमा प्रहरी सहचारी खटाउन प्रस्ताव अन्तरदेशीय प्रकृतिका अपराधको सहज अनुसन्धान र नियन्त्रणका लागि ६ देशमा प्रहरी कन्सुलर राख्न नेपाल प्रहरीले पुनः प्रस्ताव गरेको छ । मलेसिया, कतार, साउदी अरब, चीन, बंगलादेश र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा प्रहरी सहचारी खटाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधिको कार्यालयमा पनि सहचारी खटाउन प्रस्ताव गरिएको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले बताए । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दर्जाको सहचारी खटाउन प्रहरीको प्रस्ताव छ । प्रहरीले पटक–पटक यस्तो प्रस्ताव गरे पनि सरकारले निर्णय गरेको छैन । हाल भारतको नेपाली दूतावासमा मात्र नेपाल प्रहरीका सहचारी छन् ।
खासगरी, धेरै नेपालीको बसोवास रहेको देशमा सहचारी खटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । ती देशसँग मानव तस्करी, हुन्डीलगायतका अपराधको अनुसन्धानमा पनि सहज हुने प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सहजीकरणका लागि स्थायी प्रतिनिधिको कार्यालयमा सहचारी खटाउन प्रहरीले प्रस्ताव गरेको जनाएको छ । नयाँ पत्रिका बाट
Previous फेरि आयाे सबैलाई दु:खि बनाउने यस्ताे खबर !
Next ७० बर्षीय हजुरबा र नाति मिलेर गर्दा रहेछन यस्तो काम ! घरमै गएर प्रहरीले गर्‍यो पक्राउ